Fanazaran-tena Barbell Back - Ny tsara indrindra azonao atao | Bezzia
Susana godoy | 12/10/2021 16:00 | fanatanjahan-tena
Satria misy fanazaran-tena maro izay tokony hahafahantsika manamboatra ny vatantsika ary fantatsika izany. Fa amin'ity tranga ity dia miresaka isika fanazaran-tena miverina barazy tsara indrindra. Satria izy koa dia iray amin'ireo mpiara-miasa lehibe manampy antsika amin'ny hetsika tsirairay, mba hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra.
Fa raha mbola tsy azonao antoka ny toerana hanombohana azy dia fotoana tokony avelanao hoentin'ny sasany amin'ireo hevitra asehonay anao izahay. Tsarovy izany ny zavatra tsara indrindra dia ny mampiditra rakitra sasany, fa miankina amin'ny filanao foana ary mandehana tsikelikely amin'ny lanjany, satria hisy fotoana hanampiana.
1 Famonoana barika
2 Laharana Barbell
3 Press press
4 Squat aloha 'squat aloha'
5 Misintona: iray amin'ireo fanazaran-tena miverina farany
Izy io dia iray amin'ireo fototra tsara indrindra raha ny fanazaran-tena farany momba ny barbel. Ankoatry ny maha iray amin'ireo malaza indrindra anao dia afaka mampiasa dumbbells ianao. Saingy amin'ity tranga ity dia sisa tavela amin'ny safidy voalohany izay manaitaitra antsika kely kokoa isika. Samy mahasoa avokoa na ny lamosina na ny vatana ambany ho an'ny hevitra toa izao. Satria hanatsara ny fihetsika ankoatry ny fanamafisana ny lamosina ambany. Amin'ny fanazaran-tena tsirairay dia hifantoka amin'ny miaina ianao ary amin'izany dia hihatsara koa ny fivezivezena. Iray amin'ireo hevi-dehibe, raha sanatria misy fisalasalana!
Ity dia iray amin'ireo filokana lehibe ary fantatray fa tianao izany, satria azo antoka fa manana izany mihoatra ny fampidirina ianao dia ilay fivoy lakana. Miaraka amin'ny toerana marina amin'ny famonoana tsirairay dia tsy maintsy lazaina fa miasa mihoatra ny noeritreretinao ianao satria handeha io asa io manomboka amin'ny dorsal mankany amin'ny trapezius na rhomboids ary ny faritra pectoral. Noho izany dia miatrika asa feno sy ilaina isika. Mazava ho azy fa vao maika manakaiky ny pectoral ianao, ka mifantoka amin'ny latissimus dorsi sy trapezius ny asa.
Marina fa misy fomba maro hanaovana fanazaran-tena toa izao. Saingy sisa tavela amin'ny iray amin'ireo tsotra indrindra izahay, na dia lozika ho afaka hampifanaraka azy ireo amin'ny zavatra ilainao aza ianao. Raha te hampatanjaka ny hozatra amin'ity faritra ity ianao dia tsy ho diso anjara. Noho izany dia tsy maintsy ampidirintsika amin'ny fanao mahazatra foana izany. Mba hanaovana izany dia azonao atao amin'ny dumbbells na amin'ny bara ary hampiakarinao izy ireo manomboka amin'ny faritra soroka.
Squat aloha 'squat aloha'
ny mikotroka Eo foana io, andao hiresaka momba ny fanazaran-tena resahintsika, satria te-hamitana fahombiazana mahazatra mahazatra par. Izy io dia antsoina hoe iray amin'ireo fanazaran-tena mahazatra. Amin'izany ianao dia afaka mankafy hery bebe kokoa amin'ny vatana ambany. Ankehitriny dia mila maka ny toerana sahaza azy ianao ary miloka amin'ny fanamafisana ny vatan'ny ambany fa koa ny ampahany amin'ny soroka ary mazava ho azy ny lamosina, izay tena mahery fo ankehitriny. Fa amin'ireo fanazaran-tena ireo dia azo antoka fa hahatratra azy eo amin'ny indray mipi-maso ianao.
Misintona: iray amin'ireo fanazaran-tena miverina farany
Miresaka momba ny fisotroana isika fa marina fa tsy nanonona ny fomba. Ka ny fisintomana dia ho ampahany lehibe amin'ny fanaovan-javatra mendrika ny sira. Araka ny fantatrao tsara, ity karazana bara ity dia hapetaka amin'ny faritra avo amin'ny rindrina na varavarana, hahazoana fampiononana bebe kokoa. Ankoatry ny afaka mampiditra ny votoatiny Marina ihany koa fa hahazo tanjaka amin'ny hetsika tsirairay ianao mba hahazoanao fivoarana bebe kokoa amin'ny vatana fa indrindra ny lamosina. Ity dia fomba iray lavorary hahafahana mifehy ny lanjan'ny vatanao. Ka noho izany rehetra izany dia efa fantatrao fa tsy tokony avelanao any ankilany izy ireo ary tokony hampahafantarinao azy ireo amin'ny fomba mahazatra rehetra. Fantatrao izao ny fanazaran-tena miverina farany izay tsy azonao adino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Ny fanazaran-tena miverina amin'ny barbel tsara indrindra